China Active Ingxolo Control Custom Made Logo low moq ngokusesikweni casque earphone ANC 808 Bluetooth Wireless headphone Nge Microphone Ukwakha kunye Factory | Yong Fang
Ukulawulwa kwengxolo okuSebenzayo okwenziwe nguMfanekiso ophantsi we-moq ngokwezifiso iifowuni ze-casque ze-ANC 808 zeBluetooth ezingenazingcingo zeeNtloko ngeMakrofoni
Ubungakanani beMveliso: 175 (L) * 80 (W) * 200 (H) MM;
Isisombululo seBluetooth: BK 3266 V5.0
Isisombululo se-ANC: LM5896
Iprofayile yenkxaso ye-A2DP / AVRCP / HFP
Iyunithi yomqhubi: 40mm, 32ohm;
Ukuphendula rhoqo: 20Hz-20KHz;
Ukunikezelwa kwamandla: 3.7V, 400mAh Lithium Battery;
Imveliso yamandla: 35mW;
Uluhlu lokuncitshiswa kwengxolo kuluhlu: 40-600Hz;
Elona nqanaba lokunciphisa ingxolo liphezulu: 20 +/- 2dB;
Ukuncitshiswa kwengxolo yokuhamba rhoqo: malunga ne-100Hz-300Hz;
Ukusebenza umgama: 10Meters;
Ukusebenza iiyure: ukuya kwiiyure ezili-10;
Igama lemveliso: ANC-808
Ingxolo esebenzayo yokuCima ukuya kuthi ga kwi-18-22dB】Le ntloko ye-ANC iyakwazi ukubona imisindo yokusingqongileyo ngenkqubo yokurhoxisa ingxolo esebenzayo ngaphakathi kwefowuni. Yenzelwe itekhnoloji yokuTyhalela phambili ye-ANC. Inqanaba lokunciphisa ingxolo ukusuka kwi-18 dB ukuya kwi-22 dB. Ke, xa sikwinqwelomoya, ngololiwe, kwimetro, okanye sihamba kwisitalato soluntu okanye ivenkile, le ntloko ye-ANC inokuyiphelisa ingxolo kwaye ikwenzele ilizwe;
Drivers I-40mm i-neodymium enamandla ombane wokuqhuba assIzithethi zale headphone zenziwe ngokwezifiso ezisekwe kubume bezindlu ze-acoustic ezixhaswayo ze-ANC. Ivelisa kwakhona ii-bass ezinamandla amakhulu kunye nesandi esicocekileyo. Ukuba silayita umsebenzi we-ANC, amava okuphulaphula okanye onxibelelwano ayakuba ngummangaliso;
Uyilo oluLungelelanisiweyo oluDibeneyo kunye nokuKhanya kobunzima】Le ntloko yentloko yokunciphisa ingxolo iyandiswa ukulungiselela ubukhulu beentloko zabasebenzisi abohlukeneyo. Kwaye, izinto ezenziwe ngeendlebe zinokusongwa ngaphakathi, olu lwakhiwo lobunjineli luyilo luyiyo eyenza le ntloko ingabinangcingo inokugoqwa ibe sincinci kakhulu. Intloko yentloko yenziwe ngezinto ezinobunzima beplastiki kunye nezinto zesikhumba ezithambileyo. Ngokwenza njalo, le ntloko yentsimbi engenacingo ayisindi;
【Qhubeka usebenza iiyure ezili-12 ngaphandle kokuYima】Kukho ibhetri ye-lithium etshajekayo engama-400mAh ngaphakathi kwefowuni. Ngokwesiqhelo, inokusebenza iiyure ezili-12 ngaphandle kokuyeka. Ukuba uvula umsebenzi we-ANC, unokusebenza iiyure ezili-10 ngaphandle kokumisa.
Yenzelwe i-3.5mm Aux Kwisokhethi】le ntloko engenazingcingo inokusetyenziselwa njenge-headphone enentambo. Yenzelwe ngesiseko somgangatho esisi-3.5mm somgangatho. Kwaye kukho intambo eyongezelelweyo ye-3.5mm ukuya kwi-3.5mm njengezincedisi zayo. Ke, le ntloko ye-bluetooth engenazingcingo inokusebenza njengesiqhelo esiqhelekileyo esixhonywe kwi-headphone yomculo oyintloko.
Izixhobo ezilungiselelwe wena kunye neenketho ezongezelelweyo】Kule headset ye-anc, izincedisi ezisemgangathweni ziya kuba sisikhokelo esikhawulezayo, intambo yokutshaja umbane, intambo yeaudiyo, kunye nezinto ezinokuzikhethela ziya kuba yingxowa ephathekayo kunye netyala le-EVA. Kuba le ntloko engenacingo inokuwa, ukuba iza nengxowa eyenzelwe wena okanye imeko ye-eva eyenziwe ngokwezifiso, kuya kuba lula kuthi ukuba siyise naphi na apho siya khona.
Egqithileyo Uyilo lweFashoni i-Tws Earphone Factory ngokuthe ngqo ukuthengisa ngeeNdawo ezingenazingcingo ze-Stereo Earbuds ngolawulo lokuchukumisa
Iifowuni ezingenazingcingo ezingenazingcingo
Iifowuni zeBluetooth ezingenazingcingo
IiNtloko ezingenazingcingo ze-Android
IiNtloko ezingenazingcingo zeTv
IiNtloko ezingenazingcingo neMic
Iingcingo zeNtloko ezindlebeni
Inqanaba lokungena Ingxolo esebenzayo yokurhoxisa i-Wireless Bl ...
I-OEM yesiqhelo Ilogo ye-ANC evakalayo yesandi soMgangatho oPhakamileyo ...